खानामा ‘अजिना ’को प्रयोग गर्नु हुन्छ ? साब,धानः मानव स्वास्थ्यका लागि हुन्छ घातक | सुदुरपश्चिम खबर
खानामा ‘अजिना ’को प्रयोग गर्नु हुन्छ ? साब,धानः मानव स्वास्थ्यका लागि हुन्छ घातक
सामान्य खाजाघरदेखि ठूला रेस्टुरेन्टसम्म खानेकुराको स्वाद बढाउन भन्दै ‘अजिनोमोटो’ प्रयोग गरिन्छ । सेतो मसला भनिने ‘अजिनोमोटो’ वर्षमा ४ हजार मेट्रिक टन सम्म आयात हुन्छ । चिकित्सकका अनुसार खानेकुरामा यसको प्रयोग स्वास्थ्यका दृष्टिले हा’निकारक छ । हेर्दा टलक्क टल्किएका यी दाना खानेकुरालाई थप स्वादिलो बनाउन प्रयोग गरिने मोनोसोडियम ग्लुटामेट अजिनोमोटो हो । खानामा मिसाएपछि पग्लिने ‘अजिनोमोटो’ यस्तो के’मिकल हो जसले जिब्रोको स्वाद लिने भागलाई सक्रिय बनाउँछ । खुद्रा पसलदेखि ठूला स्टोरसम्म सजिलै पाइने यो मोनोसोडियम ग्लुटामेट स्वास्थ्यको लागि भने अत्यन्त हा’नि’कारक छ ।
अजिनोमोटोयुक्त खानेकुरा खाँदाः(र’गतमा ग्लुटामेटको स्तर बढ्छ, मुख्य अंगको कार्यक्षमता क’मजोर बनाउँछ ।(आँखाको रेटिनामा नो’क्सान पु¥याउँछ, मस्तिष्कको न्यूरोन्समा अ’सर गर्छ ।(प्रजनन् क्षमता क’मजोर बनाउँछ, गर्भवती र गर्भको बच्चाबीच खाद्य अपूर्तीमा अ’वरोध पैदा गर्छ ।(शरीरमा सोडियमको मात्रासँगै ब्लड प्रे’सर पनि बढ्छ ।(क्या’न्सरको जो’खिम बढाउछ ।
यस्तै, ‘अजिनोमोटो’ले अधिक भोजन रोक्न मस्तिष्कलाई संकेत गर्ने शरीरमा रहेको लेप्टिन हर्मोनलाई क’मजोर बनाउँछ । त्यसैले ‘अजिनोमोटो’ हालेको खाना जत्ति खाए पनि अघाएको जस्तो लाग्दैन ।
भारत, पाकिस्तान, युरोपका केहीसहित विश्वका करिब ५० देशमा स्वास्थ्यका लागि घा’तक ‘अजिनोमोटो’को प्रयोग ब’र्जित छ । तर, नेपालमा अत्यधिक आयात भैरहेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक बर्षमा ४ लाख ८४ हजार केजी अजिनोमोटो आयात भएको छ ।
नेपालजस्तो सानो मुलुकमा यति धेरै मनोसोडिएम आयात हुनुले केहि बर्षपछि क्या’न्सर रो’ग भयाभह हुन सक्ने चिकित्सक औंल्याउँछन् ।
डा समिर शर्मा, क्यान्सर रोग विशेषज्ञएकातिर घरको भान्सादेखि होटेलसम्म प्रयोग गर्न ‘अजिनोमोटो’को माग बढिरहेको छ भने अर्कातिर उपभोक्ता घा’तक हुने÷नहुनेबारे ज्ञान नै नभएको बताउँछन् । कतिलाई त खानामा प्रयोग गरिन्छ भन्ने ज्ञानसमेत छैन ।
नेपालमा अजिनोमोटो अत्यधिक प्रयोग हुने खाजा मम र चाउमिन हो । हामी पुग्दा एक मम सेन्टरमा अत्यधिक ‘अजिनिमोटो’ प्रयोग गरिँदै थियो ।
पकाउदा मिसाइने मात्र होइन प्याकेट ब’न्द चाउचाउ, चिप्स, फास्टफुडमा पनि अजिनोमोटोको प्रयोग गरिन्छ । मन्द बि’षको काम गर्ने ‘अजिनोमोटो’को प्रयोगमा सचेत हुन आवश्यक छ ।gnewsnepal
नछुटाई हेर्नुहोस नियमित का‘क्रो खानुका आश्चर्यजनक फाइदाहरू